Salaam Bank oo Gaalkacyo laga furey | Golis Telecom Somalia
Salaam Bank oo Gaalkacyo laga furey
Xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay oo xariga looga jarayey Xarunta Cusub ee Salaam Bank Gaalkacyo ayaa waxaa lagu qabtay hoolka shirarka Hotel Golden Plaza ee magaalada Gaalkacyo.
Munaasbadda lugu daah-furayay Salaam Bank Gaalkacyo ayaa waxaa ka qaybgalay Masuuliyiinta shirkadda isgaarsiinta Golis, maamulka sare ee Salaam Bank iyo qaar kamida ganacsatada gobolka Mudug waxaa kaloo goob-joog ka ahaa Aqoon-yahano iyo waxgaradka gobolka Mudug.
Xafladda furitaanka Salaam Bank ugu horayntii waxaa hadal kooban ka jeediyay maamulaha guud ee Salaam Bank Shucayb Xaaji Nuur Waxaana uu ka hadlay waxqabadka Bangiga isagoo sheegay in bangigu uu ku shaqaynayo qaab islaami ah, islamarkaasna uu waxbadan u qabanayo bulshada reer Gaalkacyo.
Shucayb ayaa sidoo kale sheegay in salaam Banka uu soo kordhiyey adeegyo casri ah oo ay u baahnaayeen ganacsatada ku dhaqan Puntland.Wuxuuna Bank-gu u suurta galiyey in lacagta ay heystaan marka ay accoun ka furtaan lacagtooda ay kala bixikaraan daafaha aduunka ,waxa uuna Shuceyb Sheegay in ay xiriir la leeyihiin bangiyo badan ee aduunka ah taasina waxa ay suura galisay in si fudud ay macaamiisha lacagta u taalo Salaam Bank ay u qaataan iyadoo aan wax dulsaar ah jirin.
Maareeyaha guud ee shirkadda Golis Cali Xaaji Warsame ayaa isna ka hadlay waxqabadka Salaam Bank Gaalkacyo wuxuuna sheegay in shirkadda Golis ay masuul ka tahay dhammaan hantida taala Salaam Bank isla markaana ay damaanad qaadayaan ilaalinta iyo dhawrista hantida macaamiisha Salaam Bank.
Intii ay socotay munasabadan ayaa waxaa hadalo bogaadin iyo hambalyo iskugu jiray ka soo jeediyay madasha qaar ka mid ah ganacsatada gobolka Mudug iyo waxgaradka oo dhammaantood si wada jir ah u sheegay in furitaanka Salaam Bank Gaalkacyo ay tahay horumar weyn.
Xarunta Cusub ee Salaam Bank Gaalkacyo waxaa si rasmi ah xariga uga jaray Suldaan Cabdulqaadir Suldaan Cali Suldaan Yuusuf keenadiid oo ka mid ah isimada Puntland waxana suldaanku uu hambalyo iyo bogaadin u diray bahweynta shirkadda Golis oo fududeysay furitaanka xafiiskan.